बलिउड लाई नै फरक शैलीमा मोड्न बाध्य बनाउने यी अभिनेता आखिर परिवार सहित भारत छोड्दै छन् किन ? – OSNepal
बलिउड लाई नै फरक शैलीमा मोड्न बाध्य बनाउने यी अभिनेता आखिर परिवार सहित भारत छोड्दै छन् किन ?
हिन्दी फिल्मको निर्देशन र अवस्था परिवर्तन गर्ने नवाजुद्दीन सिद्दिकीले अभिनयका लागि राम्रो अनुहार मात्रै चाहिँदैन, आफ्नो क्षमताको बलमा बलिउडमा पनि आफ्नो नाम कमाउन सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गरेका छन् । कुनै समय फिल्ममा साइड रोल निभाएका नवाज आज धेरै ठूला फिल्ममा मुख्य भूमिकामा देखिएका छन् ।
शूल र सरफरोश जस्ता फिल्ममा साना भूमिका खेलेका नवाज आज बलिउडका ठूला कलाकारमध्ये एक हुन् । नवाजले आफ्नो वास्तविक पहिचान ‘पीपली लाइभ’, ‘कहानी’, ‘ग्याङ्ग्स अफ वासेपुर’, ‘द लंच बक्स’ जस्ता फिल्मबाट पाएका थिए । लगातार आफूलाई पालिस गरेपछि उनी अहिले बलिउडका सफल अभिनेता बनेका छन् । र, उनले धेरै फिल्ममा उत्कृष्ट अभिनय गरेका छन् ।
पछिल्लो समय नवाज आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा उथलपुथलको सामना गरिरहेका थिए । द्दण्द्दण् मा, उनको आफ्नी श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेदको खबरले धेरै हेडलाइन बनायो। नवाजसँग १० वर्षदेखि बस्दै आएकी आलियाले उनीमाथि धेरै गम्भीर आरोप लगाएकी थिइन् । र, अभिनेता को बानी देखि थकित, उनले उनीबाट अलग गर्ने निर्णय गरिन् । विगतमा उनीहरुको सम्बन्धलाई लिएर राम्रो समाचार बाहिर आएपनि दुबैले आफ्नो सम्बन्धलाई सुधार्ने प्रयास गरिरहेको बताइएको छ ।
आलियाले पनि नवाजसँग अलग हुने निर्णय परिवर्तन गरेकी छिन् । अब यी दुईको सम्बन्धमा फेरि सुधार आएपछि यो जोडी पहिलो पटक सँगै आउटिङमा जाने खबर बाहिर आएको छ । समाचार अनुसार नवाजुद्दीन सिद्दिकीका छोराछोरीले आफ्नो थप अध्ययनका लागि दुबई जाने मन बनाइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा छोराछोरीलाई त्यहाँ बसाउन नवाजुद्दीन र आलिया दुवैले आफू पनि सँगै जाने निर्णय गरेका छन् । स्रोतबाट प्राप्त जानकारी अनुसार चारैजना दुबई जाने तयारी पनि पूरा भएको छ ।
चाँडै उनीहरूको उडान टिकट पनि बुक हुनेछ, र उनीहरू भारतबाट दुबई उडान गर्नेछन्। बालबालिकाको भर्नाको औपचारिकता पनि सकिएको बताइएको छ । यसबारे कुरा गर्दै आलियाले भनिन्, ‘हामी छिट्टै टिकट बुक गर्नेछौं । यसबाहेक उनी भन्छिन्, ‘हो, हामी चारैजना जाँदैछौँ । बच्चाहरू दुबई फर्किनेछन्। ” सुरुमा आलियाले बच्चाहरूसँग मात्र यात्रा गर्नुपर्थ्यो। श्रीमान्–श्रीमतीबीच सबै ठीकठाक भएकाले नवाजुद्दीन पनि आफ्ना छोराछोरीसँगै हिँडिरहेका छन् ।